Inona no atao hoe QuickSet Exe? - Fahadisoana
Tena > Fahadisoana > Fahadisoana fampiharana Quickset.exe - valiny sy fanontaniana mahazatra
Fahadisoana fampiharana Quickset.exe - valiny sy fanontaniana mahazatra
Inona no atao hoe QuickSet Exe?
quickset.exedia dingana iray izay apetraka ho azy amin'ny solosaina vita amin'ny Dell Corporation. Io dia ahafahanao manova ny fikirakirana fitantanana herinaratra ho an'ny solosainao, hanampiana anao handanjalanja ny fahombiazana sy ny tahiry herinaratra, indrindra amin'ny kahie.
Navoaka izao ny lalao, ka andao jerena ireo rakitra lalao.
Mila soloinao anarana ireo rakitra exe roa ireo. Launcher.exe mila homena anarana hafa.
Izay anarana work.sonic2app.exe dia tsy maintsy soloina anarana amin'ny Launcher.exe mba hahafahan'ny Steam manomboka ny lalao mivantana.
Foana ny fampirimana config, fa mila ireo fisie fampirimana roa: UserConfig.cfg sy Keyboard.cfg.
ovay ny toerana misy ny mpampiasa
Raha tsy manana ireo rakitra roa ireo aho, dia namela rohy fampidinana an'ireo rakitra ireo tao amin'ny famaritana ny lahatsoratra. Tapitra izao, tsara toy ny vita ianao amin'izao fotoana izao. Malahelo fa elaela lol
Azoko atao ve ny manafoana ny QuickSet amin'ny fanombohana?
Tsy voatery manomboka mandeha ho azy toa anao ity programa ityafakamihazakazaha rehefa mila. Manoro anao hevitra ianaomampandehaity programa ity mba tsy handraisana loharanon-karena ilaina.
Mitranga amin'ny rehetra izany.
Mividy solosaina vaovao ianao ary rehefa vao manomboka voalohany dia gaga amin'ny hafainganam-pandehany. Fa avy eo ...
mandehana taona vitsivitsy na volana maromaro aza, ary alohan'ny hahalalanao azy dia sahirana ny solosaina amin'ny fampandehanana programa fototra. Inona no nitranga? Betsaka ny antony mahatonga ny solosaina hiadana rehefa mandeha ny fotoana, saingy nividy lisitry ny zavatra folo azonao atao ao amin'ny Windows aho mba hanantenako azy hitovy kokoa amin'ny voalohany. Ary aza manahy fa zavatra tsotra sy maimaim-poana ireo rehetra azonao atao dieny izao.
Ny sasany amin'ireny dia mety ho toa miharihary, fa ny hafa kosa mety tsia. Ka andao ary. Voalohany ary ilaina indrindra, diovy ny programa sy serivisinao fanombohana; tsy maintsy io no antony lehibe ao ambadiky ny fihenan'ny fotoana, satria eritrereto izany.
Rehefa mandeha ny fotoana dia mametraka programa vaovao ianao, maro amin'izy ireo no manomboka amin'ny varavarankely. Ary raha tsy manakatona azy ireo ianao dia hihamaro hatrany ireo programa hiasa ao ambadika, mandany loharano. Saingy aza mieritreritra fa izany dia satria tsy mahita programa be dia be ao anaty lozisialy ianao, fa tsy programa marobe mihodina ao aoriana.
hanavao ny birao 2013
Ao amin'ny Windows 8 sy 10, azonao atao ny manokatra ny Task Manager amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Ctrl + Shift + Esc ary mankanesa any amin'ny tabilao Start raha hijery ireo programa REHETRA izay manomboka amin'ny Windows. Amin'ny Windows 7 sy aloha, mandehana amin'ny menio fanombohana ary mihazakazaha 'msconfig'. Tsindrio havanana ary atsaharo ny programa tsy ilainao eo noho eo.
Afaka mihazakazaka tanana azy ireo foana ianao, mazava ho azy, saingy tsy mila atomboka izy ireo. Eto no misoloky ny ankamaroan'ny olona. Satria ny takelaka Start dia tsy ny faran'ny tantara.
Satria programa maro no mametraka zavatra antsoina hoe 'Serivisy'
Inona ny Dell QuickSet ary ilaiko izany?
nyDell QuickSetNy Utilities dia rindrambaiko rindrambaiko iray izay manome fivoarana mihamitombo aDellsolosaina azo entina. Ny rindrambaiko dia manome fidirana mora amina lahasa maromaro izayvemazàna dia mila dingana maromaro. Ny sasany amin'ireo fiasa dia ahitana: Famirapiratana sy Fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny Keyboard Keystrokes.
tsara daholo, tongasoa eto tomahawkDIY, hijery solosaina vaovao isika anio ary hanala ireo bloatware na sasany amin'ireo rindrambaiko tsy ilaina izay mipoitra avy amin'ireo mpanamboatra solosaina bitika Ity dia Dell Inspiron14z na ilay solosaina finday n4 1 1z ka andao haka nanomboka tonga teo amin'ny menio fanombohana ary raha mankany amin'ny tontonana fanaraha-maso ianao dia vantany vao misokatra isika dia manala ireo programa misy programa.
Ka andeha hojerentsika ny fomba fanesorana programa iray ary raha vao io entana io dia handalo ny lisitry ny zavatra ananantsika sy hahalala hoe aiza no haleha eto ok, andao jerena eto ambany, andao jerena ny lisitr'izay ananantsika haingana. iza no nandray anjara tamin'ny fitazonana ny kapila mafy nataonao nandatsaka ny solosaina mba tsy hanakorontanana anay amin'ireo serivisy fanimbana tsy nahy nataon'i Dell. Azontsika atao ny mamela an'ity mpanelanelana mavitrika ity izay anoratako an'ity programa ity Andao avelao i Adobe hitoky amin'ny programa Adobe amin'ny ankapobeny. Photoshop sy Premiere Element dia napetraka manokana tamin'ny fividianana ity solosaina Advanced Audio FXengine ity dia misy ifandraisany amin'ny mpandahateny mba hahafahantsika mamela ity fifanarahana serivisy an-tsoratra amin'ny banky ity hitandrina kely fa afaka avelantsika izy izao, bleah oh izany e - Lozisialy mpamaky izay tena azo atao, na dia afaka manala ny hanaisotra aza ianao dia hanafoana ny fifanarahana momba ny serivisy fikojakojana tanteraka avy amin'i Dell indray aho, zavatra iray avy amin'i Dell no namela an'ity HD ity izay heno fa heveriko fa novakiana tamin'ny mpandahateny ataontsika ary mbola maneno serivisy dell zazalahy mpifaninana no nahazoanao betsaka ny hitazomana hatrany ity lisitra ity ity dia lozisialy izay tsy voatery atao dia azonao esorina mora foana izay misy ifandraisany amin'ny rindrambaiko fandaminana fianakaviana iray manontolo heveriko fa azo alaina maimaimpoana maimaimpoana amin'ny fampiasana ny data-safe Dell. Rindrambaiko eo an-toerana efa nomaniny ho solon'izay Backup Software Heveriko fa ity dia iray hafa tena ilaina indrindra mety heverinao fa hesorina, aorina koa amin'ny kapila mafy ao anaty t na fitehirizana angona raha tokony ho eo amin'ny Internet Eny ary, andao horita eto isika vao naharesy ireo voavonjy Data voalaza.
Manana zavatra maro isan-karazany isika izay tsy misy ifandraisany ankehitriny mba hamonjy fandefasana nomerika Dell izay misy ifandraisany amin'ny lozisialy Dell itonlineDell Getting Started Guide Ity dia safidy iray izay atomboka amin'ny solosaina vaovao, mozika ho azy io fifanarahana serivisy an-trano izay ataon'ny hafa. avelako ve ity - tsy azoko antoka tsara izay atao, fa mieritreritra aho fa tsy dia mifandraika loatra amin'ny fikorontanana ity amin'ny famokarana an-tsehatra an'ity dingana famokarana Dell vokatra sary mozika azonao jerena eto ity koa jereo ny lahatsoratra, rehetra izay azo esorina rindrambaiko tsy voatery atao amin'ny fitantanana haino aman-jery sy hijerena zavatra, fihainoana, sns. webcam touchpad miasa raha mihevitra ianao fa mila webcam tianao hotazomina ao amin'ny lakilen'ny google chrome ny tranokalan'ny safidiko manokana ka mino aho fa mieritreritra ilay rindrambaiko tsy misy tariby avy amin'ny Intel dia vehivavy Bluetooth. Avelanay ity monitor turbo boost ity fa ny fizarana tsy voatery miaraka amin'ireo mpikirakira C oreduo ireto, ity dia rindrambaiko fanaraha-maso fotsiny izay mamela anao hahita izay mitranga amin'ny processeur, koa aza misalasala mamela sakana ary esoriko hatreto fa tsy dia feno aho. azafady fa ahoana ny ilazako azy fa avy amin'ny Intel aho ary hesoriko fa tsy voatery fa afaka mividy adaptatera ho an'ny fahitalavitra ianao ary avy eo avadiho ny fahitalavitrao ho efijery solosaina lehibe ary andefaso ny fampahalalana ho an'ny takelaka solosaina tsy misy tariby, tsara ho an'ny fijerena sarimihetsika fa raha te hividy an'ity adapter ity ianao dia afaka mahazo ilay rindrambaiko amin'izao fotoana izao mandra-pahatongan'ny foibe fanaraha-maso handao ny sary izay inoan'ny mpiorina motera fitantanana Java miala ny McAfee dia anjaranao ny misafidy, mitazona na esory izany.
Matetika aho mividy entana mora vidy kokoa ka mandoa vola Ny solo-sainan'ny solosaina telo taona ka mety avelako kely hanandramana azy, saingy misy rindrambaiko antivirus maimaimpoana maro azonao apetraka amin'ny solo-sainanao toy ny tsara ny microsoft.net dia hiala amin'ity biraon'ny microsoft 2010 ity dia fanontana fanombohana izay tonga niaraka tamin'ny solosaina hesoriko, mifototra amin'ny dokam-barotra izany, azo antoka fa tongasoa eto keepa mora mieritreritra aho fa hanatsara ny endrika feno hahazoana fahazavana volafotsy amin'ity solosaina ity hametrahana ireo zavatra rehetra tokony hataon'ny mpikirakira, ary iza no mahalala hoe inona koa no heverin'ny MX ato amin'ity rakitra XML ity fa toa misy fanavaozana fonosana avy amin'ny Microsoft NeroAG azo antoka fa azo esorina raha azonao atao Te-hitazona aotra, fa izaho kosa aza mikasa ny hihazakazaka ny fotoana filalaovana amin'ny PC, fifanarahana serivisy ireo, apetraka haingana ny Rock Co Creator Starter, izay iray azo atao raha te handoro CD sy zavatra heveriko fa rindrambaiko hafa any malalaka na Windows ianao. Heveriko fa mandoro CD Androany miaraka amin'ny skype mitantana tena an'ny Windows 7 Skype 5.5 dia azonao atao ny mitazona azy io fa afaka misintona azy maimaim-poana amin'ity rindrambaiko ity ianao. Mikasa ny hanao aho mba hialana amin'ity inmine ity izay misy ifandraisany amin'ny rindrambaiko mandrindra na ny fampandrindrana rakitra dia tokony holazaiko fa zavatra manelanelana eo amin'ny fitaovana marobe ID fahatokisana izay rindrambaiko amin'ny banky malalaka sy azo sintomina izay tiako hialana amin'ny lalao tangential handeha aho hanesorana fa tsy ilaina izany ary hamela an'ity Xenoreader izay Ze ity mpamaky endri-tsoratra ity i Windows Live izay ahafahanao mividy magazay hialako an-tserasera ity dia azonao atao ny misintona azy io avy eo raha tianao izany mba hahitantsika zavatra izao mba hampisehoana aminao ny fomba fametrahana zavatra iray, araho fotsiny ny torolalana etsy ambony hisafidianana anao hanova na hanamboarana azy amin'ny lisitra tsindrio hametraka ka indroa nopotseriko izany ka io no fiomanana esorina fa azonao atao ny mamaky azy ho an'ny ny tenako dia andao hiandry kely, okay fa hilamina izany ary ho hitantsika fa efa nesorina ilay programa mba hamafana tsara ianao amin'ny voalohany rehefa manomboka amin'ny solosaina vaovao ianao, jereo ihany koa ireo lahatsoratra DIY hafa
Ahoana no fomba hialako amin'ny QuickSet?
Esory ny DellQuickSetprograma mifandraika amin'ny Control Panel
Tsindrio ny menio Start ary safidio ny Settings.
Avy eo tsindrio ny System ary safidio ny Apps & Features amin'ny tsanganana ankavia.
Mitadiava DellQuickSeteo ambanin'ny lisitra ary kitiho ny bokotra esory eo akaikiny.
Hamafiso amin'ny fipihana ny bokotra esory ao anaty varavarankely misokatra raha ilaina izany.
(Intro) - Salama, Terry aho.
Ary anio dia hofongarantsika ny lakile fanalahidy haingana sy ny bokotra blocker na hampiasa andiana fidirana izay mampiasa ilay fitaovana fanesorana haingana. Fitaovana tsy lafo io. Manamora ny fiainana tokoa amin'ny fametahana indray ny setanao haingana.
Ity no bokotra fanalahidy haingam-pandeha, ka ahodino ny bokotra ivelany amin'ny bokotra anatiny miaraka amin'ny asan'ny deadbolt any, ity tsy manana fanalahidy ity isika, jereo ny lahatsoratray eo amin'ny pejy mpikambana mba hianarana ny fampiasana an'io hidin-trano io mandresy. Misy fomba maromaro hihoarana azy io ary hanokafana azy. Fa androany dia asehonay anao fotsiny ny fomba hamerenene azy indray.
skype tsy manam-petra mampifandray
Mora tokoa ny manidy azy ao anatiny miaraka amin'ny visy roa izay mitazona ny tahony. Mora esorina ny hidiny. Tena, tena mora.
Tsy manana izany fanalahidy izany koa aho, fa na dia nanana ny lakileny aza ianao dia mbola mila mandalo ireo teboka ireo ihany. Izy io dia eo afovoany. Jereo eo, izy rehetra dia mankamin'ny ankavanana hatrany amin'ny ankavia.
Mila mandeha eo afovoany isika. Ary avy eo dia raisinay fotsiny ilay fitaovana, ataontsika eto, spindle. Milatsaka fotsiny izy io.
Ka esorina mora foana ireo spindles. Ampiasao izao ny faran'ny fitaovana famotsorana haingana dia toy izao, apetaho fotsiny eto. Ary midina eto io.
Nahazo ny penina teny an-dalana kely ianao, esory tsy ho afa-maina. Mora izany. Manome, maty.
latabatra karazana powerpoint
Kotsero kely fotsiny, potsero ny loharano hamoahana azy ireo dia hihatsara ny fitaovana. Ny fitaovana dia manohy manosika ny mpihazona varingarina voatana. Mora ny manongotra.
Ankehitriny dia manana toerana malalaka isika. Halefanay izany. Hampiasa banga aho hametahana azy io.
Ary averiko indray, ireo lahatsoratray hafa dia mampiseho izay tena mitranga ao anatiny. Hizarantsika amin'ny banga na tsanganana ity. Sarotra hatrany ny mahazo ilay voalohany, izay patsa dimy prong, dimy, dimy maivana, telo-telo iray, ahodina 45 degre io.
Esory ny mpanasa lamba. Ankehitriny hampiasa ny kitapo fitaovana HPC aho. Ka ny HPC dia misy mpanaraka isan-karazany ao anatiny.
Atsofohy ny varingarina ary lasa ianao, tonga lafatra tanteraka. Ary hanangana ny kitapo isika. Noho izany dia atsipintsika fotsiny ireo ary apetrantsika ao ny banga, akaiky foana miaraka amin'ny banga isika.
Hampiasainay ny kit ny pin labanay dimy izay 204 ary ny roa dia 195. Azonao atao ny manamarina azy indray. Mandeha tsara ny zava-drehetra.
Ny tsimatra rehetra dia mihosotra amin'ny tsipika fanetezam-boaloboka ary ny fametrahana indray ny hidy dia eo amin'ny zoro 45 degre. Apetraho izy. Lavorary.
Aza roviana indray. Hanidina an'i Springs ianao. Avereno jerena ilay clip ary ento koa ny spindle-nao.
Andramo haingana izany. Lavorary. Avereno eo amin'ny hidiny io, afatory izy.
Locks ndao hamoha azy. Mihidy indray, esory ny lakile, mamoha. Fitsapana foana, mandrakariva, foana.
fifanakalozana kaonty microsoft
Pejy misy rohin-drakitra tapakaAmin'ny tenim-pirenena hafa (Outro)
Ny rakitra quickset.exe dia rakitra ve rafitra Windows?
Ny rakitra quickset.exe dia tsy rakitra rafitra Windows. Tsy hita ny programa. Izy io dia fisie Verisign nosoniavina. Ny dingana dia azo esorina amin'ny Control Panel. Quickset.exe dia afaka mirakitra fampidirana kitendry sy totozy ary manara-maso ireo rindranasa.
Mampidi-doza ve ny fisie VeriSign quickset.exe?
Izy io dia fisie Verisign nosoniavina. Ny dingana dia azo esorina amin'ny Control Panel. Quickset.exe dia afaka mirakitra fampidirana kitendry sy totozy ary manara-maso ireo rindranasa. Noho izany ny laharam-pahamehana ara-teknika dia mampidi-doza 37%, na izany aza tokony hamaky ny hevitry ny mpampiasa ihany koa ianao.
Trojan ve ny rakitra Quickset.exeon azo ampiharina?
Ny rakitra azo ampiharina dia mety hanimba ny solosainanao amin'ny tranga sasany. Noho izany, azafady mba vakio eto ambany raha manapa-kevitra ianao raha toa ka Trojan ny quickset.exe eo amin'ny solo-sainanao fa tokony hesorinao, na raha rakitra an'ny rafitra Windowsoperating na fampiharana azo itokisana ianao. Tsindrio raha Hanao scan maimaimpoana ho an'ny lesoka mifandraika amin'ny quickset.exe
Ahoana no fomba hanesorako ny Dell QuickSet amin'ny solosaiko?
1. Misokatra Control Panel. 2. Ao amin'ny Control Panel, tadiavo ny esory ny programa iray amin'ny Programs. Eto ianao dia afaka manandrana mijery isaky ny sokajy mba hahitanao mora ny Programs. 3. Avy eo ao amin'ny programa sy ny fikandrana fikandrana, scroll scroll down to pinpoint the Dell QuickSet Utility ary tsindrio havanana hamafana azy io. 4. Atsangano indray ny PC-nao mba hisy vokany.